ManarakaMapa | NextMapping ™ Podcasts
Cheryl Cran sy ny vahiny hiresaka ny zavatra rehetra ho 'hoavin'ny asa' sy ny fomba fampiasana NextMapping ™ mba hamoronana ny hoavinao mahomby.
Henoy avy amin'ny CEO, CIO's, Data Scientists, siantifika ara-tsosialy, mpahay siansa momba ny fitondran-tena ary ny ho avin'ny vavahadin'ny asa amin'ny podcastasts NextMapping ™.
Henoy ny mpitarika mizara fomba fijery momba ny ho avin'ny asa avy amin'ireo orinasa toa ny Upwork, Freelancer, BDO sy ny maro hafa.
Izany no antony - Global News Podcast
Featuring Cheryl Cran - Miaraka amin'ny haitao mandroso sy ny haino aman-jery tsy manam-pahaizana mandritry ny mpiasa dia tsy dia miahiahy intsony ny fiarovana ny asa ho an'ny taranaka ankehitriny sy ho avy. Tamin'ity herinandro ity dia hijery ny fomba hivoaran'ny tsenan'ny asa ary ny fomba hanampiana ny mpiasa hahazo ny asa tsara indrindra mety hitranga amin'ny ho avy.
Brad Breininger, Mpanorina ny Zync Agency manadihady Cheryl Cran momba ny ho avin'ny asa sy ny marika.
Cheryl sy Brad dia miady hevitra momba ny asa ho jerena toa ny ho avy - ary ahoana no hanovana ny marika sy ny marketing ho fanohanana ny zava-misy vaovao.
Resadresaka Cheryl Cran Brad Breininger, mpiara-manorina ny Zync Agency ho an'ny NextMapping™ podcast ity.
Cheryl sy Brad dia miady hevitra momba ny maha-zava-dehibe ny fanaovana branding mandritra ny krizy ary ny fomba hametrahana ny marika koa.
Hijery hihaino bebe kokoa momba ny 'ny ho avin'ny branding sy ny normal normal'.
Ahitana an'i Ross Thornley, CEO & mpiara-manorina ny AQai - Fanombanana sy fanofanana azo ampifanarahana.
I Ross sy Cheryl dia miady hevitra momba ny fomba fiheveran'ny olona sy fampifanarahana haingana amin'ny fanovana sy fanomanana azy ireo amin'ny ho avin'ny asa.
Tamin'ny voalohan'ny volana martsa 2020, nipetraka niaraka tamin'i Scot sy Holly tany amin'i Cheryl i Cheryl NRECA hiresahana ny hoavin'ny coops.
Noresahina manokana ny fiantraikan'ny teknolojia, ny fanovana ny toeram-piasana sy ny fotoana ho an'ny mpitondra coop amin'ny ho avy.
Ahitana an'i Marc Porat, Partner Millis Advisors, Inc.
I Marc sy Cheryl dia miady hevitra momba ilay sarimihetsika avo lenta, 'Majika ankapobeny, 'teknolojia, maha-olombelona ary ny hoavin'ny maha-olombelona.
Jason Campbell ao amin'ny MindValley manadihady Cheryl Cran momba ny ho avin'ny asa sy ny dikan'ny tsirairay.
Mizara ny saina momba ny fitarihan-tena i Cheryl, ny fomba vaovao hitarihana fanovana hahatongavana amin'ny ho avy amin'ny asa sy ny fomba fisainana ilaina ilaina hamoronana hoavy tsara.
Ahitana an'i Jim Somers, VP an'ny marketing eo amin'ny LogMeIn
Henoy ny ho avy amin'ny tafatafa niarahana niasa tamin'i Jim Somers, VP an'ny Marketing ho an'ny sehatry ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa ao amin'ny LogMeIn
Misongadina amin'i Ryan Lester, Talen'ny Teknolojia za-draharaha amin'ny mpanjifa traikefa at LogMeIn. Ryan sy Cheryl mifanakalo hevitra momba ny fiantraikan'ny AI, bots ary automation amin'ny ho avin'ny asa sy ny fiainana.
Zahao Ryan AI: Ao amin'ny Real Life Podcast Eto.
Misongadina amin'ny Dr. Rovy Branon, lefitra mpanolo-tsaina ho an'ny oniversite any Washington Continum College. Ny Dr. Rovy sy Cheryl dia miady hevitra momba ny ho avin'ny fampianarana.
Manasongadina an'i Ben Wright, CEO an'ny Velocity Global. I Ben sy Cheryl dia mifanakalo hevitra momba ny fomba ahafahan'ireo orinasa mivezivezy sy manitatra eran-tany amin'ny alàlan'ny teknolojia sy ny fomba hiomanana amin'ny ho avin'ny asa.
Ahitana an'i Amber Mac, Filoha, AmberMac Media, Inc. Amber sy Cheryl dia miady hevitra momba ny fironana teknolojia, ny fiovan'ny dizitaly, ny fanavaozana ary ny ho avin'ny asa.
Misongadina amin'i Matt Barrie, CEO an'ny Freelancer.com & Escrow.com Matt sy Cheryl dia miady hevitra momba ny hoavin'ny asa, ny ho avy amin'ny asa ary Freelancer - ny tsena fivezivezena lehibe indrindra manerantany, mampifandray ireo matihanina maherin'ny 30 tapitrisa manerantany.
Amin'ity andiany ity Radile Agile, Ny Catalant's SVP momba ny fiaraha-miasa stratejika sy ny Marketing Rich Gardner dia miara-mipetraka amin'ny Future of Work Expert & Mpanorina NextMapping Cheryl Cran. I Rich sy Cheryl dia miady hevitra momba ny famaritana ny samily, ny fanovana mpitarika ary ny kolontsaina fanavaozana. Cheryl dia manome fahitana momba izay takian'ny mpitondra ao amin'ny tontolon'ny haingam-pandeha, anisan'izany, ny tena zava-dehibe, ny fisainana mody mora foana. Mampandreneso mba handre ohatra momba ny fomba ahafahan'ny mpitarika manampy ny fikambanany hanova sy ny toro-hevitra azo ampiharina ary ny dingana manaraka hananganana ekipa efa vonona.
Misongadina amin'ny Dr. Thomas Ramsøy amin'ny Neurons, Inc. Nanadihady an'i Dr. Thomas Ramsøy i Cheryl momba ny atidoha, mamantatra ny ho avin'ny asa.
Manasongadina an'i Liz O'Connor, Principal Associate an'ny Daggerwing Group
Nanadihady an'i Liz O'Connor i Cheryl momba ny fitarihana ny sehatra amin'ny alàlan'ny fampiharana ny Facebook, ny fanovana ny fitantanana, ny fitantanana ny fanovana, ny firotsahan'ny mpiasa ary ny fiaraha-miasa
Cheryl Cran dia nohadihadian'ny Michael Alf ho azy Podcast mikorontana mikorontana momba ny Hoavin'ny asa sy ny fomba ahafahan'ny mpiasa mamorona ny ho aviny.
Fampisehoana Hamoon Ekhtiari, Tale Jeneralin'ny Audavi futures Resadresaka Cheryl Cran Hadinam-bokatra Tale Jeneraly Hamoon Ekhtiari momba ny ho avin'ny asa ary ny antony fiaraha-miasa ny ho avy.
Ny hoavin'ny haino aman-jery dia ahafahan'ny mpiara-miombon'antoka sy ny mpanjifany miatrika ny fanamby amin'ny fomba famerenan'ny radikan'ny famerenana indray sy ny fomba famolavolana ny hoavin'ny fiainana, ny fikambanana ary ny fiaraha-monina.
Cheryl Cran dia nohadihadian'i Dr. Nancy McKay momba ny fiovan'ny fivoarana mitranga amin'ny hoavin'ny asa.
Misongadina an'i Chris Barbin, CEO an'ny Appirio
Cheryl Cran nanadihady an'i Chris momba ny ho avin'ny asa sy ny fiantraikan'ny computing rahona. Mizara fahitana sarobidy momba ny ho avin'ny rahona sy ny fiantraikany amin'ny ho avin'ny asa Izy.
Ahitana an'i Sebastian Siseles, talen'ny Freelancer
Cheryl Cran dia nanadihady an'i Sebastian momba ny fiantraikan'ny freelancer amin'ny asa aman-draharaha. Nozarainy ny fomba ilain'ny mpandraharaha amin'izao fotoana izao mba hahafahany manararaotra toeram-piasana izay misy ny fotoana feno, ny fotoana sy ny mpiasa tsy miankina.
Ahitana an'i Shoshana Deutschkron, VP an'ny serasera sy marika ho an'ny UpWork
Cheryl Cran nanadihady an'i Shoshana momba ny ekipa lavitra - ny fomba ahafahana mirotsaka am-pahombiazana sy mitarika ny ho avin'ny asa misy ny fitomboan'ny ekipa lavitra.
Mpanotrona Tale Jeneralin'ny UpWork, Stephane Kasriel
Cheryl Cran nanadihady an'i Stephane momba ny zavatra hitany amin'ny ho avin'ny asa ary ny antony ilain'ny orinasa manararaotra ny fanakorontanana ny 'toekarena mpandraharaha'.
Misoratra anarana amin'ny podcasts NextMapping
Mahalalà hatramin'ny farany ny fiovan'ny fitaky haingana ny ho avin'ny asa.